Semalt विशेषज्ञ: डाटा स्क्र्यापि - - Amaz आश्चर्यजनक पाइथन अनुप्रयोगहरू
डाटा स्क्र्यापि,, डाटा निकासी र वेब स्क्र्यापिंग पनि भनिन्छ, वेबसाइटहरुबाट डाटा निकाल्ने को तकनीक हो। प्रत्येक साइटले HTML वा केही स्थिर पाठको रूपमा जानकारी होस्ट गर्दछ। यदि तपाईं यी पाठहरूलाई स्क्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले डाटा स्क्र्यापि tool उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्क्र्यापी, उदाहरणका लागि, पाइथन-आधारित डाटा एक्स्ट्र्यासन सफ्टवेयर हो जुन विभिन्न साइटहरूबाट जानकारी स्क्र्याप गर्दछ र असंघटित डाटालाई संरचित फारममा रूपान्तरण गर्दछ। अर्कोतर्फ, ब्यूटीफुलसप पाइथन लाइब्रेरी हो जुन विभिन्न वेब स्क्र्यापि and र डाटा खनन परियोजनाहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। दुबै स्क्र्यापी र ब्यूटील्ससप स्वचालित रूपमा असंगठित डाटालाई एक संगठित फाराममा रूपान्तरण गर्दछ र तपाईंलाई तत्काल पढ्न योग्य र स्केलेबल जानकारी दिन्छ।
पाइथन एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा हो। पाइथनको विचार १ 1989in मा सुरु भयो जब Guido van Rossum को ABC भाषाको कमजोरीहरूले सामना गरे। उनले नयाँ प्रोग्रामिंग भाषा विकास गर्न शुरू गरे जुन गतिशील र जटिल साइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न सक्दछ। आज, पाइथनमा विभिन्न कार्यान्वयनहरू छन् जस्तै Jython, IronPython र PyPy संस्करण।
प्रोग्रामरहरू र वेब विकासकर्ताहरूले यसको बहुमुखी सुविधाहरू र सिक्न सजिलो प्रोग्रामिंग कोडहरूको कारण पाइथन मन पराउँछन्। पाइथनको केहि आश्चर्यजनक अनुप्रयोगहरू तल छलफल गरिएको छ।
१. तेस्रो पार्टी मोड्युलहरूको उपस्थिति:
ब्युनल्डसुप र पाइथन प्याकेज अनुक्रमणिका (पायपीआई) मा विभिन्न तेस्रो-पार्टी मोड्युलहरू समावेश छन् जुन साइटको एक ठूलो संख्याको डाटा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्छ। पाइथनको प्रमुख लाभहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईं सजीलो र सुविधाजनक उपकरणहरूको ठूलो संख्या विकास गर्न सक्नुहुनेछ।
२ पुस्तकालयहरूको विस्तृत श्रृंखला:
तपाईं विभिन्न पाइथन लाइब्रेरीबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईं चाहानु भए जति वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, Scrap ले तपाईलाई वास्तविक समयमा डेटा स्क्र्याप गर्न सजिलो बनाउँदछ। सर्वप्रथम, यो उपकरण विभिन्न साइटहरू मार्फत नेभिगेट गर्दछ र तपाईंको लागि उपयोगी जानकारी स collect्कलन गर्दछ। अर्को चरणमा, यो पाइथन-आधारित उपकरण तपाईंको आवश्यकता अनुसार डाटा scrape हुनेछ। पाइथन र यसको लाइब्रेरीहरूको साथ विभिन्न उच्च-प्रोफाइल डेटा निकासी कार्यहरू पूरा गर्न सकिन्छ।
Open. खुला स्रोतको भाषा:
पाइथन OSI- अनुमोदित खुला स्रोत इजाजतपत्र अन्तर्गत विकसित गरिएको थियो। यो भाषा प्रोग्रामरहरू, कोडरहरू, विकासकर्ताहरू, र उद्यमहरूका लागि उपयुक्त छ। पाइथन को विकास समुदाय द्वारा संचालित छ जुन मेलिंग सूचीहरू र होस्टिंग सम्मेलनहरू मार्फत यसको कोडहरूको लागि सहयोग गर्दछ।
Py. पाइथन एक उत्पादक भाषाको रूपमा:
पाइथनसँग फ्रेमवर्क, पुस्तकालयहरू, र सफ्टवेयर छनौट गर्नको लागि विस्तृत श्रृंखला छ। जाभास्क्रिप्ट, पर्ल, VB, C, C ++, र C # अन्तर्क्रिया गर्दा यसले प्रोग्रामरको उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाईं पाइथन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ HTML फाईलहरू, पीडीएफ कागजातहरू, छविहरू, अडियो र भिडियो फाईलहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न।
जेडीबीसी र ओडीबीसीको तुलनामा पाइथनको डाटाबेस बिट अविकसित र आदिम भेटियो। त्यसकारण यो भाषा शुरुआतीहरू र वेबमास्टरहरूको लागि मात्र उपयुक्त छ। यदि तपाईं जटिल साइटहरू ह्यान्डल गर्न पाइथन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि सही भाषा नहुन सक्छ। यसको सट्टामा, तपाईले PHP वा C ++ र जटिल साइटहरूबाट सजिलैसँग डेटा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि पाइथनसँग एक वस्तु-उन्मुख डिजाइन छ, तर PHP र C ++ यस भाषा भन्दा धेरै राम्रो छ किनकि तपाईंलाई धेरै धेरै कोडहरू सिक्नुपर्दैन।